7 Waddo oo Lagu Garto Saaxiibka Dhalanteedka ah | Aayaha
Aayaha editorOctober 25, 2018
Saaxiibtinimadu waxey leedahay miisaan gaar ah nolosha aadanaha qiimo goonni ah ayey ugu fadhidaa, saaxiibkaa waxa uu noqon karaa qofka ugu horreeya ee aad agtiisa ku nafisto oo aad xasillooni iyo ammaan ku dareento, waxaa kale oo dhici karta in saxiibtinimadu ay dhibaato badan kuu horseeddo, waa marka aad aragto wejiga dhabta ah ee saaxiibkaa u qarsoonaa.
Haddii aad aragto saaxiib aan mid rumaad ahayn, sida ugu dhakhsiyaha badan uga fogow, si albaabada ugu furto saaxiibbo rumaad oo nolshaada horumarkeeda ka qeybqaadan kara.
Sidaa darteed, waxaa jira calaamado ay wadaagaan saaxiibbada daneystayaasha ah oo haddii aad qof ku aragto ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato:
Marka aad u baahan tahay ma helaysid
Saaxiibka rumaad si joogta ah ayuu kuu garab istaagaa, waxa uu aad u raadiyaa faahfaahinta nolsohaada, halka saaxiibka dhalanteedka ah uu marmarsiiyo ka dhigto waddo kasta si aanuu kuu garab istaagin.
Waxa uu kula soo xiriirayaa marka uu wax kaaga baahan yahay oo qura
Saaxiibka dhalanteedka ah waxa uu kula soo xiriiraa marka ay dani kaaga xiriran tahay oo uu wax kaaga baahan yahay oo qura, daraasaad arrintan laga sameeyay ayaa sheegaya in 70% noocyada saaxiibbada ay daneysi ku dhisan tahay, 30% oo qura ay tahay mid rumaad oo aan maslaxad gaar ah ku dhisneyn, saaxiibbada rumaad si toos ah ayey iskula xiriiraan iyagoo aan dan gaar ah iska lahayn.
Waxaa ku adag fakarkaaga inuu fahmo
Saaxiibka dhalanteedka ah waxaa ku adag inuu fahmo habka aad u fakarto, mar kasta waxaad u baahan tahay inaad waxwalba fahamsiiso, si ka duwan saaxiibka rumaad oo mar kasta si wanaagsan u fahma sida aad u fakareyso.
Mar kasta wuu iskaa jecelaysiiyaa runtana kuuma sheego
Saaxiibka dhalanteedka ah waxa uu ku dadaalaa inuu iskaa jeclaysiiyo oo aanuu runta kuu sheegin dhaliil kasta oo aad leedahay. halka saaxiibka rumaad uu mar kasta runta uu kuu sheegayo oo aanuu dan ka lahayn in runtaa uu kuu sheegayo ay ku damqeyso iyo in kale, maadaama uu maslaxadaada ka talinayo.
Saaxiibka dhalanteedka ah inuu dhibaatooyinkaaga dhageysto diyaar uma aha
Dhageysiga wanaagsan waa qeyb muhiim ah oo nolosha ka mid ah, marka ay mushkiladi ku soo waajahdo waxaad u baahan tahay inaad hesho saaxiib wanaagsan oo garabkaaga jooga oo si fiican kuu dhageysta, haddii aad aragto inuu doonayo in mushkiladihiisa oo qura uu sheegto adigana aanuu waxba kaa dhageysanayn waa calaamad muujineysa inaanuu saaxiibkaa rumaad ahayn.
Ka eeg calaamado xaasidnimo
Inta badan dadka waa saaxiibbo wanaagsa inta la wada siman yahay oo aan waxba la is kala dheerayn, laakiin marka aad guulo gaarto ayaad dadka qaar ku arkaysaa calaamado xaasidnimo iyo inaaney raalli ka ahayn guulaha aad gaartay, waxaanad dareemaysaa sidii iney tartan kugula jiraan oo kale, sidaa darteed; iska ilaali saaxiibbada noocaas oo kale ah, noloshaada culeys mooyaane faa’iido uuma laha.
Saaxiibkaaga rumaad sirtaada ma faafiyo
Marka aad saaxiibkaa ku sir qarsato oo sirtaa dhinac saddexaad aad ka maqasho, ogow inaanuu qof kaasi ahayn saaxiibkaaga rumaad, maxaa yeelay; saaxiibbada dhabta ah sirahooda iskama faafifiyaan.
Ugu dambeyn, saaxiibkaa u run sheeg oo wixii aad ku aragtay ee aanadan ka helin u sheeg, haddii aad ku aragto calaamado qoomameyn ah iyo inuu ka xun yahay wixii dhacay, fursad labaad markaa wuxuu mudan yahay inaad la xumeyn.
Signs your employees are unhappy
If you notice these 5 things in a job advert, know its fake
3 Astaamood Oo Lagu Garto Marka Ninkaagu Jecelyahay Haweeney Kale (Lambarka Koowaad Waa Caddeyn Buuxdo)
5 Sababood Oo Kugu Qasbaya Inaadan Marnaba Baarin Taleefanka Xaaskaaga (Ka Fogoow)
Shantaan Waxyaabood Ee Wanaagsan Ku Dheh Xaaskaaga Oo Ka Farxi Iyadoo Careysan Ama Niyad Jabsan